Shandong Gongxiang Mengyuan Trading Co., Ltd. kuyinto kanye nokuthekelisa namazwe angaphandle ukuhweba inkampani onguchwepheshe ukucutshungulwa ezijulile kwemikhiqizo yezolimo. Ekhulwini lama-21, ke waphendula esiphendula ngayo ekhweleni elihlatshwe Party Central Committee sika ukuze kwakhiwe le "Maritime Silk Road" ukuvumela imikhiqizo Chinese wezolimo ukukhonza mpumalanga ye-Asia, e-Asia Ephakathi, West Asia, eNyakatho ye-Afrika, futhi naseYurophu eMaphakathi neseMpumalanga.
Shandong Gongxiang Mengyuan Trading Co., Ltd. itholakala umsunguli ubuConfucian, umuzi ka-Confucius, Jinan, Shandong, China. Umuzi Jinan has 72 amagama iziphethu, yonke imindeni spring amanzi, imizi ukukhala willow, nge nezindawo ezinhle, kanye nezwe odumile. Inkampani ikakhulu iphatha ukucutshungulwa ezijulile okukhethekile kwemikhiqizo yezolimo, efana: pepper, imikhiqizo Chili sauce, imikhiqizo isinongo izinongo liyakufanelekela, imikhiqizo eqandisiwe soy, imikhiqizo izithelo okusemathinini, imikhiqizo hawthorn, imikhiqizo garlic, imikhiqizo jujube, ezijulile-inqubo inkukhu ukucutshungulwa ezijulile imikhiqizo kanye neminye imikhiqizo.
Inkampani yethu njalo ithobela umoya neyobuntu ka "abambisane idumela, ukufuna ukuthuthukiswa kanye izinga, thatha funa emakethe njengoba umhlahlandlela, futhi uthathe inzuzo kithi nakuye futhi win-win njengoba isisekelo salo" ukufuna ukuthuthukiswa ezivamile.
Vision: Yakha isiteji zero-ibanga ngoba izwe ukuqonda Chinese imikhiqizo yezolimo Mission: Ukuze babe ungumqondisi nongoti embonini ukuthekelisa umkhiqizo wezolimo, futhi ukukhuthaza yokwanda Confucian namasiko Amanani: Kusukela Lilliput Ukwakha Umphakathi Wezempilo Human ukudalelwa